Aaranjaan iyo Curyaaminta Gaalkacyo – CNN Somali
HomePuntlandAaranjaan iyo Curyaaminta Gaalkacyo
January 14, 2021 cnnsomali Puntland, Somalia, Wararka Maanta 0
Gaalkacyo ( CNN SOMALI ) Kala dirista Golaha Deegaanka Gaalkacyo waxaa ka dambeeya siyaasad fog oo lagu curyaaminayo horumarka iyo nabadda Gaalkacyo.
Xukuumadda Madaxweyne Deni oo u muuqata u adeegida danaha Aaranjaan waxay talo xumo kasto ku fulisaa magaalada Gaalkacyo.
Dhowr arimood aan dib u eegno:
Sannadkii 2019, waxaa la kala diray Golaha Deegaanka Gaalkacyo. Ujeedadu ahayd in lala wareego maamulka degmada. Horumarkii socday oo dhan waa istaagay.
Sannadkii 2020, waxaa lagu fuliyey ‘dib u habaynta ciidanka’ si hubka iyo ciidanka loo hoos keeno Taliyaha Qaybta Mudug oo ah wiil ay Aaranjaan u xilsaarteen gobolka Mudug.
Sannadkaan bilowgiisa 2021 waxaa la kala diray Golaha Deegaanka Gaalkacyo. Ujeedada fog waa curyaaminta magaalada Gaalkacyo si looga reebo qorshaynta horumarka sannadka.
Magacaabida Maxamuud Cabdi Nuur oo lagu yaqaan musuqmaasuqa jidka Gaalkacyo- Garowe Waa fariin qaldan oo loo dirayo hay’adaha iyo deeqbixiyayaasha sababtoo ah ninkaas wuxuu ku calaamadaysanyahay dib u dhaca iyo musuqmaasuqa ku yimid dhisamaha jidka Gaalkacyo-Garowe. Dawladda Jarmalka waxay sheegtay asaga iyo dhowr nin oo kale inay ahaayeen dadka ay ka wadi waayeen shaqada dhismaha jidkaas.
Sannadkii hore Maxamuud Shido (Aaranjaan) waxaa laga soo sheegay inuu ka welwelsanyahay sida reer Mudug lacagtooda ula aadeen Gaalkacyo iyo Garacad arintaas hadaan la joojin inay dhib weyn ku noqonayso ayaga. Aragti ahaan waxay iska dhaadhiciyeen in horumarka Gaalkacyo yahay dib u dhaca Garowe Waana arin ka fog xaqiiq da ee ah xiqdi iyo xaasidnimo.
Reer Gaalkacyo xasuusnow hadalkii Xasan Shire Abgaal uu Gaalkacyo ka sheegay ‘dagaal baan ka abuuraynaa oo Galmudug kusoo jeedinaynaa’. Howshaas bilowgeedii Waa tii Wasiirka Maaliyada Puntland uu diiday inuu ka qayb galo Aaska loo sameeyey Maxamuud Yaasiin Tumey AUN, isla maalinkiina uu ka qayb galay aaska ciidanka xooga Dalka ee dawladda Federaalka oo lagu qabtay dhinaca Galmudug.
Horumarka iyo Amniga Gaalkacyo wuxuu ku xiranyahay sida ay u dhaqmaan Odeyaasha, dhalinyarada, iyo dadkeeda jecel nabadda iyo horumarka. Sababta tuke canbaar leh la idiinku keenay waa xishood la’aan iyo indha adeyg. Majirto hay’ad caalami ah oo la shaqaynaysa Maxamuud Cabdinuur oo ku jira blacklist ga dawladda Jarmalka iyo Midowga Yurub
Maqaal: Qaybi oo xukun: ‘Federaalka’ qabyaaladeysan ee Soomaaliya Qalinkii Mohamed Ismail Abdullahi (Mohamed Midnimo)